जन्म चिनो र कोठीः रहस्यमय अर्थ - DibyaJyotish (दिव्य ज्योतिष)
एक जन्म चिनो गर्भ समयमा वा बच्चाको जीवन को पहिलो केही महिना विकसित हुन सक्छ। तर के जन्म चिनो वा दागको कुनै अर्थ छ र? कहाँबाट कसरी आँउछ यस्तो चिनो। संस्कृति तथा सभ्यता अनुसार के कस्तो कथा चल्दै आएको छ यस्तो चिनोको बारेमा? के यि चिनोहरुले तपाइको पूर्वजन्मको बारेमा केही जानकारी बोकेको हुन्छ त? यस्तो चिनोको आधारमा कसैको बानी-व्यवहार तथा भविष्य अड्कल काट्न सकिन्छ त?
आउनुहोस् केही जानौं शरिरका यि रहस्यमय जन्म दागको बारेमा।
विज्ञान संग उत्तर छैन।
एउटा वैज्ञानिक भइको नाताले स्टेभेन्सनले गर्भाअवस्था र आनुवंशिक कारणहरुको अध्ययन गरेका थिए। तर यो अध्ययनले छालामा देखिने यस्ता रंगिन फरकपनको ३०%-६०% सन्दर्भमात्र व्याख्या गर्न सकेको थियो। तर ती बच्चाहरुको अनौठा स्मृति र जन्मदागको सम्बन्धको अध्ययनले स्टेभेन्सनलाइ पुनःजन्म जन्मको सान्दर्भिकता बारेमा सकारात्मक बनाएको भने थियो।
भुत र वर्तमान एकअर्कामा अत्यन्त सम्बन्धित रहेका हुन्छन जब यस्ता कहिलै नहराउने जन्म दागहरु कसैको शरिरमा छापिएर आएका हुन्छन। यस्तो दुइ कारणले हुने गर्छ।
पहिलो शरिरले पुनःजन्मको अवधिमा पाएको पुरानोघाउहरु निको पार्न समय नपाउनाले र दोस्रो पूर्वजन्मको शरिरले पाएको दुःख र आघात निकोपार्न र बिर्सन दिमागलाइ ती घटनाहरुसंग सम्बन्ध राख्न आवश्यक भएकाले।
यसरी हेर्दा यस्ता चिनोहरु पहिलेको शरिरले कुनै दुःख पाएको छ र फेरी पुनःजन्म हुनेवाला छ भने शरिरमा देखिने गर्दछन्।
केही जन्मदाग र ती दागसंग सम्बन्धित सम्भावित पूर्वजन्मका घटनाहरु यसप्रकार छन।
+ बिसो भएका अनि बिसो नभएका जलेका दाग
+ गोलीलागेको दागजस्तो जन्म दाग
+ अलि गहिरो गोलीको दाग
+ केही गोपिएको जस्तो जन्म दाग
+ पुरानो अनि बिषयुक्त वाणले बनाएको चिनो
+ यातनाको अवशेष